ခင်ပွန်းတိုင်း သိသင့်တဲ့ ဇနီးသည်ရဲ့ နာကျင်မှုတွေ – စှယျစုံသုတ
ကျမတို့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကိုယ့်ခင်ပွန်းကို ပါးစပ်ကနေ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပြောကြားစရာမလိုဘဲနဲ့ သူတို့စိတ်လိုလက်ရ နားလည်ပေးစေချင်တာတွေရှိတယ်။
အဲဒီလို နားလည်မပေးနိုင်တဲ့ ခင်ပွန်းကြောင့် နာကျင်ရတာတွေလည်း အများကြီး ရှိကြပါတယ်။ အချို့ဒဏ်ရာတွေက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သိပ်မကွာလောက်အောင် ထပ်တူကျတတ်ပြန်ပါသေးတယ်။
အထူးသဖြင့် စိတ်ရော လူရော သိပ်ကို ပင်ပန်းနေရင် အမျိုးသမီးတွေက ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို သူ သိပ်ပင်ပန်းနေပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း အပြုအမူနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပါးစပ်ကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတတ်ကြတယ်။
သိပ်ကို ပင်ပန်းနေပြီဆိုတာကို အချို့က သက်ပြင်းတွေ ချပြတယ်၊ အချို့က တကယ့်ကို နွမ်းနယ်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရုပ်သွင်ကို ပြတယ်၊ ပွင့်လင်းတဲ့ အမျိုးသမီးကတော့ ကျမ သိပ်ကို ပင်ပန်းနေပြီလို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ခင်ပွန်းက ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ပန်းမှုအပေါ် အသိအမှတ်မပြုရင်၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရင်၊ အားပေးစကားမပြောတဲ့အပြင် အရေးမပါသလို ပစ်ပစ်ခါခါ ဆက်ဆံရင် အသည်းထဲကထိ နာကျင်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ သူတွေ၊ ကိုယ် မမြင်ချင်တဲ့ သူတွေ၊ ကိုယ်မ ဆက်ဆံစေချင်တဲ့ သူတွေ ရှိလာခဲ့ရင်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို သိစေတတ်ကြတယ်။ အချို့ကတော့ အဲဒီလူ(အမျိုသား၊ အမျိုးသမီး)ကို သဘောမကျတဲ့အကြောင်း စကားသံနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အမူအရာနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သိစေတယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ဗြောင်ဖွင့်ပြောတတ်တယ်။
”ကျမ သူ့ကို မကြိုက်ဘူး၊ သူ့ကို မမြင်ချင်ဘူး ရှင်သူနဲ့ ဆက်ဆံရေး မလုပ်ပါနဲ့”လို့ တားမြစ်တာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဆဌမ အာရုံကြောင့်တားတာမျိုး ရှိတတ်သလို၊ ကိုယ့်ခင်ပွန်းနဲ့ ခေါ်ပြောဆက်ဆံရင်းနဲ့ကိုယ့်ခင်ပွန်းရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ ထိခိုက်လာမှာစိုးလို့ ကြိုတင်ကာကွယ်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
အဲဒီလို ပြောထားပါလျက်နဲ့ ခင်ပွန်းက ဇနီးသည်ရဲ့ အမြင်၊ ဇနီးသည်ရဲ့ ခံစားချက် စတာတွေကို အလေးအနက်မထားသလို ပြောဆိုဆက်ဆံတယ်ဆိုရင်၊ကိုယ်သဘောမကျတဲ့သူ မပေါင်းပါနဲ့လို့ တားထားတဲ့ သူကိုမှ မပြတ်မသားနိုင်ဘဲနဲ့. ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရင်လည်း ငါ့အပေါ် ငါ့ခံစားချက်အပေါ် ငါ့ စကားအပေါ် အလေးအနက်မထားပါလား၊ သူနဲ့ ငါ့ကိုတောင် လဲ မလို့လား ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ဝမ်းနည်း နာကျင်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုယ်နဲ့သူရဲ့ အမှတ်တရ နေ့တွေ၊ မိသားစုတွေရဲ့ အမှတ်တရနေ့တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် အလေးအနက်ထားတတ်တဲ့ သူတွေက ကိုယ့်ခင်ပွန်းကိုလည်း အဲဒီပေါ်မှာ အလေးအနက်ထားပေးစေချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူက မေ့နေတဲ့အခါ၊ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့အခါ၊ ဒါမှ မဟုတ် အဲဒီရက်က အရေးမကြီးသလို သဘောထားပြီး ပြောဆိုနေတဲ့အခါမှာလည်း ဝမ်းနည်းနာကျင်မှုကို ခံစားရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုယ်မှာလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းကို အကြိမ်ကြိမ်မေ့လာတာ၊ မေးလိုက်မိတဲ့ စကားကို ပြန်မဖြေတာ၊ မကြားချင်ယောင်ဆောင်နေတာ၊ ကိုယ်
ဘေးနားမှာ ကိုယ်ရှိလျက်နဲ့ ကိုယ့်အပေါ် အာရုံမရှိတာ၊ ကိုယ့်ကို အလေးအနက်မထားဘဲ ဆက်ဆံပြောဆိုသလို ဖြစ်နေတာတွေက အမျိုသမီးတွေရဲ့ ဝမ်းနည်းနာကျင်မှုကို ဖြစ်စေတော့တာပါပဲ။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ခင်ပွန်းသည်ကြောင့် နာကျင်ခံစားရနိုင်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေကတော့ အများကြီးရှိတတ်ပါတယ်။ အခြေခံက ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ခံစားမှု၊ ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့ ပြောဆိုမှုအပေါ်မှာ အလေးအထားသလို၊ ဂရုမစိုက်သလို၊ အရေးမပါသလို တုန့်ပြန်မိလို့ ဖြစ်ရတာတွေ ချည်းပါပဲ။
အမျိုးသမီးတွေဟာ စိတ်ခံစားချက်ကို အလေးအနက်ထားတဲ့သူတွေဆိုတာကို နားလည်ပြိး သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ပြောဆိုသမျှကို ဂရုစိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဇနီးသည်ကို စိတ်ဒဏ်ရာကင်းကင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်အောင် ထားနိုင်တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်လာမှာပါ။
အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ့်ဇနီးသည်ရဲ့ နှလုံးသားနဲ့ ခံစားချက်ကို မြင်အောင် မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဇနီးသည်ရဲ့ နှလုံးသားဟာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေဦးမှာပါပဲ။
အဲဒီနာကျင်မှုက စိတ်ထဲကနေ နှလုံးသားထဲထိ တစိမ့်စိမ့်စီးဝင်လာတဲ့အခါ အိပ်မပျော်တာ၊ စကားမပြောချင်တော့တာ၊ လောကကြီးကို စိတ်ကုန်လာတာ.. အဲဒီလိုတွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီလို ဖြစ်နေတဲ့အခါ နေမကောင်းဖြစ်လာတာမျိုး စိတ်ပင်ပန်းကိုယ်ပင်ပန်းနဲ့ ခြေကုန်လက်ပန်းကျလာရတာမျိုးတွေနဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုး ကိုယ့်ဇနီးမှာ ရှိနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဇနီးရဲ့ စိတ်ထဲက ဒဏ်ရာကို နားလည်မှုပေးပြီး ကုသပေးနိုင်သူဟာ ဆရာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ ဇနီးရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့သူပါ။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ထဲက နာကျင်မှုကို ကုသနိုင်တဲ့ ဆေး ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ကျမ သေချာမသိပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သေချာပြောနိုင်တာကတော့ နာကျင်မှုဟာ၊ ကြင်နာမှုကြောင့်တော့ ပျက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းနာကျင်နေတဲ့ ဇနီးသည်ကို ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ဂရုတစိုက်အကြင်နာနဲ့ ကုသပေးရင် ကြည်နှူးမှုကိုခံစားရတဲ့ ဇနီးသည်ဟာ စိတ်ရော လူပါ ပြန်လည် လန်းဆန်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့ သေချာပြောနိုင်ပါတယ်ရှင်။
ခင်ပွန်းတိုင်း သိသင့်တဲ့ ဇနီးသည်ရဲ့ နာကျင်မှုတွေ
ကျမတို့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ကိုယ့်ခင်ပွန်းကို ပါးစပ်ကနေ ဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပြောကြားစရာမလိုဘဲနဲ့ သူတို့စိတ်လိုလက်ရ နားလည်ပေးစေချင်တာတွေရှိတယ်။
အဲဒီလို နားလည်မပေးနိုင်တဲ့ ခင်ပွန်းကြောင့် နာကျင်ရတာတွေလည်း အများကြီး ရှိကြပါတယ်။ အချို့ဒဏ်ရာတွေက တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သိပ်မကွာလောက်အောင် ထပ်တူကျတတ်ပြန်ပါသေးတယ်။
အထူးသဖြင့် စိတ်ရော လူရော သိပ်ကို ပင်ပန်းနေရင် အမျိုးသမီးတွေက ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို သူ သိပ်ပင်ပန်းနေပြီ ဖြစ်တဲ့အကြောင်း အပြုအမူနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ပါးစပ်ကနေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတတ်ကြတယ်။
သိပ်ကို ပင်ပန်းနေပြီဆိုတာကို အချို့က သက်ပြင်းတွေ ချပြတယ်၊ အချို့က တကယ့်ကို နွမ်းနယ်နေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ရုပ်သွင်ကို ပြတယ်၊ ပွင့်လင်းတဲ့ အမျိုးသမီးကတော့ ကျမ သိပ်ကို ပင်ပန်းနေပြီလို့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ ကိုယ့်ခင်ပွန်းက ကိုယ့်ရဲ့ ပင်ပန်းမှုအပေါ် အသိအမှတ်မပြုရင်၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေရင်၊ အားပေးစကားမပြောတဲ့အပြင် အရေးမပါသလို ပစ်ပစ်ခါခါ ဆက်ဆံရင် အသည်းထဲကထိ နာကျင်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အမျိုးသမီးတွေက ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ သူတွေ၊ ကိုယ် မမြင်ချင်တဲ့ သူတွေ၊ ကိုယ်မ ဆက်ဆံစေချင်တဲ့ သူတွေ ရှိလာခဲ့ရင်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို သိစေတတ်ကြတယ်။ အချို့ကတော့ အဲဒီလူ(အမျိုသား၊ အမျိုးသမီး)ကို သဘောမကျတဲ့အကြောင်း စကားသံနဲ့ဖြစ်ဖြစ် အမူအရာနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သိစေတယ်။ ပွင့်လင်းတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ဗြောင်ဖွင့်ပြောတတ်တယ်။
”ကျမ သူ့ကို မကြိုက်ဘူး၊ သူ့ကို မမြင်ချင်ဘူး ရှင်သူနဲ့ ဆက်ဆံရေး မလုပ်ပါနဲ့”လို့ တားမြစ်တာမျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဆဌမ အာရုံကြောင့်တားတာမျိုး ရှိတတ်သလို၊ ကိုယ့်ခင်ပွန်းနဲ့ ခေါ်ပြောဆက်ဆံရင်းနဲ့ကိုယ့်ခင်ပွန်းရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကိုပါ ထိခိုက်လာမှာစိုးလို့ ကြိုတင်ကာကွယ်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
အဲဒီိလို ပြောထားပါလျက်နဲ့ ခင်ပွန်းက ဇနီးသည်ရဲ့ အမြင်၊ ဇနီးသည်ရဲ့ ခံစားချက် စတာတွေကို အလေးအနက်မထားသလို ပြောဆိုဆက်ဆံတယ်ဆိုရင်၊ကိုယ်သဘောမကျတဲ့သူ မပေါင်းပါနဲ့လို့ တားထားတဲ့ သူကိုမှ မပြတ်မသားနိုင်ဘဲနဲ့. ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရင်လည်း ငါ့အပေါ် ငါ့ခံစားချက်အပေါ် ငါ့ စကားအပေါ် အလေးအနက်မထားပါလား၊ သူနဲ့ ငါ့ကိုတောင် လဲ မလို့လား ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ၀မ်းနည်း နာကျင်တတ်ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုယ်နဲ့သူရဲ့ အမှတ်တရ နေ့တွေ၊ မိသားစုတွေရဲ့ အမှတ်တရနေ့တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် အလေးအနက်ထားတတ်တဲ့ သူတွေက ကိုယ့်ခင်ပွန်းကိုလည်း အဲဒီပေါ်မှာ အလေးအနက်ထားပေးစေချင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူက မေ့နေတဲ့အခါ၊ မေ့ချင်ယောင်ဆောင်နေတဲ့အခါ၊ ဒါမှ မဟုတ် အဲဒီရက်က အရေးမကြီးသလို သဘောထားပြီး ပြောဆိုနေတဲ့အခါမှာလည်း ၀မ်းနည်းနာကျင်မှုကို ခံစားရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကိုယ်မှာလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းကို အကြိမ်ကြိမ်မေ့လာတာ၊ မေးလိုက်မိတဲ့ စကားကို ပြန်မဖြေတာ၊ မကြားချင်ယောင်ဆောင်နေတာ၊ ကိုယ်
ဘေးနားမှာ ကိုယ်ရှိလျက်နဲ့ ကိုယ့်အပေါ် အာရုံမရှိတာ၊ ကိုယ့်ကို အလေးအနက်မထားဘဲ ဆက်ဆံပြောဆိုသလို ဖြစ်နေတာတွေက အမျိုသမီးတွေရဲ့ ၀မ်းနည်းနာကျင်မှုကို ဖြစ်စေတော့တာပါပဲ။
ပြောရမယ်ဆိုရင် ခင်ပွန်းသည်ကြောင့် နာကျင်ခံစားရနိုင်တဲ့ တုန့်ပြန်မှုတွေကတော့ အများကြီးရှိတတ်ပါတယ်။ အခြေခံက ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ခံစားမှု၊ ထင်မြင်ယူဆချက်နဲ့ ပြောဆိုမှုအပေါ်မှာ အလေးအထားသလို၊ ဂရုမစိုက်သလို၊ အရေးမပါသလို တုန့်ပြန်မိလို့ ဖြစ်ရတာတွေ ချည်းပါပဲ။
အမျိုးသမီးတွေဟာ စိတ်ခံစားချက်ကို အလေးအနက်ထားတဲ့သူတွေဆိုတာကို နားလည်ပြိး သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ပြောဆိုသမျှကို ဂရုစိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဇနီးသည်ကို စိတ်ဒဏ်ရာကင်းကင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်အောင် ထားနိုင်တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်လာမှာပါ။
အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကိုယ့်ဇနီးသည်ရဲ့ နှလုံးသားနဲ့ ခံစားချက်ကို မြင်အောင် မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဇနီးသည်ရဲ့ နှလုံးသားဟာ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေဦးမှာပါပဲ။
အဲဒီနာကျင်မှုက စိတ်ထဲကနေ နှလုံးသားထဲထိ တစိမ့်စိမ့်စီးဝင်လာတဲ့အခါ အိပ်မပျော်တာ၊ စကားမပြောချင်တော့တာ၊ လောကကြီးကို စိတ်ကုန်လာတာ.. အဲဒီလိုတွေ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
အဲဒီလို ဖြစ်နေတဲ့အခါ နေမကောင်းဖြစ်လာတာမျိုး စိတ်ပင်ပန်းကိုယ်ပင်ပန်းနဲ့ ခြေကုန်လက်ပန်းကျလာရတာမျိုးတွေနဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုအခြေအနေမျိုး ကိုယ့်ဇနီးမှာ ရှိနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဇနီးရဲ့ စိတ်ထဲက ဒဏ်ရာကို နားလည်မှုပေးပြီး ကုသပေးနိုင်သူဟာ ဆရာဝန်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီ ဇနီးရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့သူပါ။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ စိတ်ထဲက နာကျင်မှုကို ကုသနိုင်တဲ့ ဆေး ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ကျမ သေချာမသိပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သေချာပြောနိုင်တာကတော့ နာကျင်မှုဟာ၊ ကြင်နာမှုကြောင့်တော့ ပျက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းနာကျင်နေတဲ့ ဇနီးသည်ကို ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ ဂရုတစိုက်အကြင်နာနဲ့ ကုသပေးရင် ကြည်နှူးမှုကိုခံစားရတဲ့ ဇနီးသည်ဟာ စိတ်ရော လူပါ ပြန်လည် လန်းဆန်းလာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုတော့ သေချာပြောနိုင်ပါတယ်ရှင်။